Hambalyo, Bogaadin iyo Duco : 18-ka May, Maalin sida sawirka ka lulata quluubta Shacabka SOMALILAND. |
Hambalyo, Bogaadin iyo Duco : 18-ka May, Maalin sida sawirka ka lulata quluubta Shacabka SOMALILAND.
•Waxaan halkan Hamablyo uga dirayaa dhammaan shacab-waynaha reer Somaliland, guddo iyo dibad-ba. Waa waalidiinta (aabayaal Iyo hooyooinkeen) wallaalaheen (hablo Iyo inamo) Xaasaskeena Iyo Caruurteena.
•Waxaan halkan Hambalyo balaadhan uga dirayaa dhamaan ciidamada Qaranka Somaliland, gaar ahaana, inta ku sugan jiida hore ee habeen iyo dharaar-ba u taagan ilaalinta amniga iyo nabad-gelyada Somaliland. naftood-hurayaashii u soo halgamay ee dhiigooda u daadiyey Qarankan aynu maanta hadhsanayno ee Somaliland, siiba intii ku wayday, naftooda, maalkooda, Iyo waliba waalidkood.
•Waxaan halkan Hambalyo uga dirayaa dhammaan Madaxda Qaranka oo aan ugu horaysiinayo Madaxwaynaha Somaliland, Haybadle, Muuse Biixi Cabdi, Madaxwayne ku xigeenka, Sharafle, Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil. Madaxwaynayaashii iyo ku xigeenadii imika ka hor dalka ka soo taliyey, intoodii dhimatay ILaahay haw naxariisto.
•Sidoo kale, waxaan halkan Hambalyo uga dirayaa Golaha bah-waynta Saxaafadda Qaranka ee Somaliland oo aan iyaga leeyahay ‘ barbarkay ka baxdaa waa bakayle qaleen, ka feejignaada dad soo huwaday shaadhadhkiina oo ku hadla magaciina’ ugu dambayn,
•waxaan halkan uga ducaynayaa inta xanuunsanaysa ee dhakhtarada jiifta oo aan leeyahay ILaahay waa karaaye Caafimaad deg deg ah ha idin siiyo.
Siciid Khaddar aw-Cabdillaahi